Madaxweyne Trump oo sheegay in uu doonayo in uu la kulmo Madaxweynaha Iran…
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu ogolyahay in uu la kulmo Madaxweynaha Wadanka Iran marka la gaaro xilli ay ku haboontahay. Hadalkiisa ayaa waxaa uu imaanaya kadib markii Wasiirka Arrimaha Dibadda Iran uu warbixin siiyay Shirka kooxda 7 oo uu ugu tagay socdaal aan la sii shaacin. Xiriirka u dhexeya Iran iyo Mareykanka […]
Posted on August 27, 2019 August 27, 2019 Author Hareerley News	Comment(0)
Maamulka Koofur galbeed oo hakiyay Dacwadaha la xiriira Dhulka…
Cabdi Wahaab Cabdullaahi Maxamuud Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Cadaaladda Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la hadlay laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa sheegay in Wasaaradda Cadaaladda ay xoojisay xiriirka wadashaqeyn ee kala dhaxeeya hay’adaha Garsoorka si loo helo garsoor cadaalad ah, islamarkaana laga gudbo musuq maasuqa, waa sida uu hadalka u dhigay. Wasiir ku xigeenka ayaa […]
Ciidan iyo hub badan oo saakay la geeyay Dhuusamareeb…..
Diyaarado siday Ciidan, hub farabadan iyo Gaadiidka Gaashaaman ayaa saaay waxaa ay ka degtay Magaalada Dhuusamareeb ee gobalka Galgaduud. Ilaa Shan diyaarad ayaa waxaa la sheegay ay wadaan Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo Saanad Ciidan, iyada oo Ciidamadaas ay dirtay Dowladda federaalka Soomaaliya. Ciidamadan ka tirsan dowladda Soomaaliya ee saakay la geeyay Magalaada Dhuusamareeb […]
Ra’iisul Wasaaraha Isra’iil oo Difaacay Duqaymo Dowladdiisu ka geystay dalal shisheeye….
Israa’iil ayaa sheegtay in gudaha dalka Suuriya ay ku beegsatay ciidamo ay leedahay dowladda Iraan iyo maleeshiyaad Shiica ah halka gudaha Lubnaan, gaar ahaanna koonfurta caasimadda Beyruud ay ku soo dhacday diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ee Drone-ka loo yaqaan oo ay leedahay Israa’iil. Koonfurta Beyruud ayaa ah meel xoogagga Xisbullah ay ku xoogan yihiin. […]
Ciidamada amaanka oo Beledweyne ka baadi goobaya odayaal la kulmay Al-Shabaab…..
Guddoomiyaha magaalada Beledweyne ee Gobolka Hiiraan Maxamed Ibraahim Foodcadde oo wareysi gaar ah siiyay KNN, ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay odayaal ka soo jeedda Gobolka Hiiraan gaar ahan magaalada Beledweyne, kuwaasi oo la soo kulmay dagaalamayaasha Al Shabaab isla markaasina la iskasoo diiwaangeliyay goobo ay ka arimiyaan Guddoomiyaha ayaa sheegay in odayaashani ay soo […]
Xildhibaano ka tirsan Dowladda iyo odayaal oo kulamo ka wada Dhuusamareeb…..
Waxaa kulan aan caadi aheyn magaalada Dhuusamareeb ku yeeshay Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya,Siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah Odayaasha iyo waxgaradka deegaannada Maamulka Galmudug. Kulanka ayaa waxaa uu u dhaxeeyay, Xildhibaano ay ka mid tahay Senator Jawaahir Axmed Cilmi,Siyaasiga Cali Yare Cali iyo Odayaal ka kala yimid Magaalooyinka Gurceel, Matabaan Gala-jir, Xanan-buure, Mareer-gur, Gadoon, […]
Ciidan Saanad loogu qeybiyay Jowhar….
Magaalada Jowhar ee Xarunta Dowlad Goboleedka Hirshabeelle waxaa Saanadda ah loogu qeybiyay Ciidan Boolis ah oo uu dhawaan tababartay maamulka Hirshabeelle. Ciidamada Booliska ah oo lagu tababaray gudaha Maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa la siiyay Dharka iyo Kabaha Booliska. Taliyaha Booliska Maamulka Hirshabelle Xasan Dhicisow ayaa ciidamadaasi u qeybiyay dareyska Ciidanka Booliska. Ciidamada ayaa waxaa ay […]
Ciidanka Amniga oo Muqdisho ku qabtay sarkaal ka tirsanaa Al-shabaab…
Ciidamada amaanka dowladda SOomaaliya ayaa howlgal ay ka sameeyeen Magaalada Muqdisho waxaa ay gacanta ku dhigeen sarkaal ka tirsan Al-shabaab. Howlgalka oo laga fuliyay xalay xaafadda Carafaad ee Degmada Yaaqshiid ayaa lagu sheegay in lagu qabtay sarkaal ka tirsan qeybta Amniyaadka ee AL-shabaab kaas oo aan magaciisa la sheegin. Ciidamada ayaa howlgalka ka fuliyay guriga […]
Booliska Muqdisho oo xabsiga dhigay Agaasime ku xigeenka tirsan G.Banaadir…
Ciidamada Booliska ah ee Magaalada Muqdisho ayaa xabsiga dhigay Agaasime ku xigeen ka tirsanaa Maamulka Gobolka Banaadir. Agaasime ku xigeenka xilliga la xirayay waxaa uu shir kula jiray Guddoomiye ku xigeenka Gobolka Banaadir waxaana uu ka mid ahaa guddiga qaban qaabada xil wareejinta Maamulka Gobolka Banaadir. Ciidamo ka socda Booliska Gobolka Banaadir ayaa agaasimaha kala […]
8 Madaxweynayaal hore oo ka qeybgelaya Madasha Koofi Anaan….
Madasha Nabadda iyo Amaanka ee Koofi Anaan ayaa ku dhawaaqday sideed Madaxweyne oo sanadkan ka qeybgeleya shirka sanad laha ah ee ay qabato hay’addaasi. Shirka oo ka dhacaya caasimadda Dalka Ghana ee Accra ayaa waxaa ka qeybgelaya sideed ka mid ah madaxweynayaasha Afrika soo maray ee hadda nool. Soomaaliya waxaa uga qeybgelaya Madaxweynihii hore ee […]